Atôma Info. About. What's This?
Ny atôma dia singan-javatra kely indrindra mety mivondrona amina foto-javatra hafa mba hanome izay atao hoe môlekiola. Ny teôria atomista, dia manohana ny hevitra hoe ny zavatra dia vita "voany" tsy afaka zarazaraina, dia fantatra hatry ny Taona Taloha, ary i Demôkrita, filôzôfy grika taminizany andro izany, no nonanohana ny teôria atômista. Ny teôria notohanani Demôkrita dia niadian-kevitra hatraminny faranny taonjato faha 19, ary ankehitriny ny hevitri Demôkrita dia tsy adin-kevitra intsony. Ny foto-kevitry ny siansan-javatra ankehitriny dia mifototra aminio hevitra io. Tsy heverina fa v ...
Ny hidrôksida dia rio miiba manana raikipohy simika OH –. Ny mpanorina azy io ia atôma ôkzizenina ary hidirôzenina izay mifamatotra aminny alalanny fatotra kovalenta ary mitondra lanjam-boanaratra miiba.
Ny zavamananaina na zavamiaina dia zavatra voa-janahary misy eto an-tany izay miaina sy mizatra ny zava-misy. Aminny teny anglisy sy frantsay dia atao hoe organism sy organisme ny zavamananaina. Zavatra miaina ka mitombo, mihetsika, miteraka, ary mampiasana angovo ny zavamanaina. Fizika hahatakatra dia voafaritra famphenana taminny entropy fikorontanana sy fitombo taminny pitsipitsini ny fiainana. Mampiely fikorontanana raha manjary abo pitsipitsini ny fiainana. Ny sokajy: biby marosela, holatra marosela, protista marosela, zavamaniry marosela na tokan-tsela, bakteria tokan-tsela, archaeab ...
Ny habakabaka ivelany dia ny toerana ao anelanelanny zavatra anhabakabaka toa ny tany. Izy io dia tsy tena fona fa ahitana voanjavatra vitsivitsy toa ny plasma, hidrozenina, heliôma na taratra ara-kanjanandrianaratra, neotrinô, vovoka ary tanamaherin-kabakabaka. Ny mari-pana ambany indrindra aminizy io dia 2.7 kelvin na –270.45°C. Ny zavatra tsotra ao aminny habakabaka ivelany dia plasma izay manan-kakitrokisa latsaky ny atôma hidrozenina iray isaky ny metatra toratelo ary mari-pana miisa tapitrisa kelvin ao aminny habakabaka anelanelam-bondronkintana; lasa ahitana kintana sy vondron-kinta ...
Ny soson-drivotranny tany dia fonona entona misy manodidonny tany ahafahanny fiainana misy ary ny rano miranoka nohonny tsindry. Ny rivotra maina dia misy azôty, ôksizenina, argôna, diôksida karbônina ary etona hafa. Ny soson-drivotranny tany dia miaro ny fiainana eto an-tany aminny alàlanny fanakanana ny tanamasoandro ankoatra ny volomparasy. Ny hafanana dia tazonny soson-drivotra mba hanakely ny elanelan-kafanana mba tsy hangatsiaka loatra rehefa alina ny andro ary mba tsy hafana loatra rehefa mazava ny andro. Tsy misy faritra mazava manasaraka ny habakabaka sy ny soson-drivotra. Ny tsin ...
I Epikorosy na Epikora dia filôzôfa grika, mpanorina ny sekolin "ny Zaridaina" izay ataon’ ireo mpandimby azy hoe epikorisma. Teraka tamin ny taona 341 tal. J.K. izy ary maty tamin ny taona 269 tal. J.K. tao Atenay izy.
Ny fahagagana dia zava-miseho tsy araka ny mahazatra na heverina fa tsy fehezin ny lalanan ny natiora, sady asan ny hery tsy hita maso avy amin ny andriamanitra na avy amin Andriamanitra na ny fanahy hafa. Fisehoan-javatra mihoa-draha ny fahagagana ka tsy voafehin ny fahefana na ny hery na ny fahaizan ny olombelona. Mety hiseho mivantana tsy misy mpanelanelana izany nefa mety ho amin ny alalan ny mpanompon io andriamanitra io na ny mpanompon Andriamanitra. Tsy manan-kambara ny amin ny fahagagana ny siansa satria zavatra tsy hay hazavaina na porofoina araka ny lalanan ny saina izany. Isan n ...
Ny rio dia atôma na môlekiola izay manana isa manontolonny voanaratra tsy mitovy aminny isa manontolonny protôna, izay manome azy lanjam-boanaratra miabo na miiba.
Ny hidirôzenina dia singa simika misy ny marika H sy isa atomika 1. Miaraka aminny lanjanny atôma mahazatra 1.008, ny hidirôzenina no singa maivana indrindra ao aminny tabilaonireo singa simika.
Ny manganezy dia singa ara-tsimia izay karazana metaly mora vaky, miloko fotsy, aseho amin ny eva ara-tsimia hoe Mn sady mitondra ny laharana araka atôma 25. Metaly tetezamita ny manganezy. Tamin ny taona 1774 no nahafantarana voalohany ny manganezy tamin ny alalan ny fikarohana nataon ilay simista soedoà atao hoe Carl Wilhelm Scheele.